မတ်လ ၁၆ ရက်တွင် Samsung Galaxy S16 ကိုဝယ်ယူနိုင်မည့်နေ့ဖြစ်သည် Androidsis
မတ်လ ၁၆ ရက်က Samsung Galaxy S16 ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်နေ့ဖြစ်သည်
နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Galaxy S25 အားဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung ကတင်ဆက်မည့်နေ့သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။အရာ၏သူ၏နောက်ထပ်နှစ်ခုအထင်ကရ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကြိမ်ဖန်များစွာစကားပြောပြီ၊။ ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၁၆ ရက်မတိုင်မှီအချိန်အကြာကြီးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းယခင်ကပြောခဲ့ဖူးသည့်ရက်စွဲဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းတို့အားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၎င်းတို့အားပုံမှန်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု Samsung က Samsung သို့စျေးကွက်သို့သွားမည့်အဆင့်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ S16 နှင့် S9 + သို့ဖြစ်သည်။
Samsung ကိုယ်တိုင်တင်ပြသောအစီရင်ခံစာတွင်၎င်းအချက်အလက်များကိုသူအားကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြသည်။ စျေးကွက်သို့မသွားခင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားနိုင်သည့်အချိန်များကိုပြောပြသည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားပါသည်. ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပိုပြော!
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Samsung Galaxy S29 နှင့် S8 + ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်ယနေ့အာရှကုမ္ပဏီ၏အရေးအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းနှစ်ခုနှင့်eventsပြီလ ၂၁ ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးထိုဖြစ်ရပ်နှစ်ခုနှင့် ၂၃ ရက်ကွာခြားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်သည်စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်နှစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်တော်သောနေ့ရက်ဖြစ်သည်S8 သည်ထိုအချိန်က SXNUMX နှင့်တူညီသောကြားကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုမှသည်၎င်း၏ရောင်းအားအထိဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဤယိုစိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအခြားအချက်အလက်များအရ၊ တောင်ကိုရီးယားရှိမတ် ၂-၈ မှကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မတ်လ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ကြိုတင်၍ ဝယ်ယူနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဥရောပနှင့် ပတ်သက်၍ ကျော်ကြားသောပြင်သစ်စစ်ထုတ်စက် Roland Quandt က၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ဖြစ်သောတင်ဆက်မှု၏ နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ ဒါတောင်မှဒီမိုဘိုင်းဖုန်းနှစ်လုံးကိုတင်ဆက်သည့်နေ့က Samsung သည်တရား ၀ င်ရက်စွဲကိုကြေငြာခြင်းဖြင့်သံသယများနှင့်မှန်းဆမှုများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » မတ်လ ၁၆ ရက်က Samsung Galaxy S16 ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်နေ့ဖြစ်သည်
Xiaomi ၏ဂိမ်းမိုဘိုင်းကို Black Shark ဟုခေါ်သည်
Samsung Galaxy Note 8 သည် Android 8.0 Oreo ကို WiFi Alliance အရ update ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်